Joke – Page2– Blue Sea
blueseaskt | March 22, 2019
[ ဘုန်းကြီးလူထွက်​ပဲ ယူမယ်​ ] _____________________ ” ဘာလဲ? ​လျှောက်စမ်း ” `တပည့်​​တော်​ ​ယောက်ျားယူရင်​ ဘုန်းကြီးလူထွက်​ရှာယူမှာ ` ” ဟာ — မသာမ​​လေး။ ​စော​စောစီးစီးကွာ ငရဲကြီး​အောင်​ ​ပြောပြန်​ပြီ ” ` ဘာလို့ ငရဲကြီးမှာလဲ? လူထွက်​ကိုရှာယူတာ။ တပည့်​​တော်​​ကြောင့်​ လူထွက်​ရတယ်​ဆိုတစ်​မျိုး​ပေါ့။ တပည့်​​တော်​က
​တွေးပြီး တစိမ့်​စိမ့်​ ရီ​နေတဲ့ဟာသ​လေး( ရီချင်​ရင်​ ဖတ်​ကြည့်​လိုက်​​နော်​)
blueseaskt | March 21, 2019
အီရတ်​သွားရမှာ စိုးလို့ စစ်သားပလုံပလန်တစ်​​ယောက်​ ထွက်​​ပြေးလာတယ်​.. တပ်ထိန်း​တွေက လိုက်​ဖမ်းတယ်​.. တ​စ်နေရာမှာ သီလရှင်​ တစ်ပါးကို​တွေ့တယ်​.. စစ်​စတာ ကျ​နော့်ကို စစ်​စတာ ဂါဝန်​ ​အောက်​မှာ ခဏ ပုန်းခိုင်းပါ.. ရပါတယ်​ကွယ်​.. စစ်​စတာ ဒီနားက​နေ စစ်​သား တ​ယောက် ဖြတ်​​ပြေးသွားတာ ​တွေ့လား… တပ်​ထိန်းတ​ယောက်​က စစ်​စတာ ကို​တွေ့​တော့​မေးတယ်​.. ဟိုဖက်​ကို​တော့ ​ပြေးသွားတာ​
သူငယ်​ချင်း​တွေ ကိုယ့်​လို မဖြစ်​ရ​အောင်​ပါ… ကိုယ်​ လတိုင်းလိုလို ထီထိုး​လေ့ရှိ​ပေမယ့်​ ဘယ်​​တော့မှ ထီတိုက်​​လေ့ မရှိပါဘူး… ထီ​ပေါက်​ရင်​ ထီဆိုင်​ကပဲ ဖုန်းဆက်​လာလိမ့်​မယ်​လို့ ​တွေးပြီး ကိုယ်​တိုင်​ ထီတိုက်​ရမှာ ပျင်းတတ်​ပါတယ်​… ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီ​နေ့​တော့ တိုက်​တိုက်​ဆိုင်​ဆိုင်​ ကိုယ့်​​ရှေ့က ထီ​ပေါက်​စဉ်​သည်​ ဖြတ်​သွားတာနဲ့ ကိုယ့်​လက်​ထဲမှာလည်း အ​ကြွေ နှစ်​ရာရှိတာနဲ့ ​ပေါက်​စဉ်​တစ်​​စောင်​ ဝယ်​ပြီး ကိုယ်​တိုင်​
ဆရာမတစ်​​ယောက်​ငရဲပြည်​​ရောက်​သွားတဲ့အခါ ( ရီလိုက်​ရတာ အူ​တောင်​နာတယ်​ ဟီးဟီး)
ငရဲပြည် ကတောင် လက်မခံရဲတဲ့ ဆရာမ ========================= “ဟဲ့ မောင်မင်းတို”့ “ငရဲပြည် တံခါးဝ အလှည့်ကျလာတာက ဘယ်သူတုန်းဟဲ့” “မှန်လှပါအရှင် ” “ငရဲပြည် တံခါးဝ အလှည့်ကျလာသူက အဖြူအစိမ်း ဝတ်လို့ လူ့ပြည် မှာ ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်ခဲ့သူပါ ဘုရား” “ဟေ” “ကျောင်းဆရာ မဆိုတာ ရပ်ကျိုးရွာကျိုးလွန်သယ်ပိုပြီး လူကြီး
blueseaskt | March 16, 2019
#ကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူး *********************** နာမည်ကြီးခွဲစိတ်ဆရာဝန်သုံးဦး စကားလက်ဆုံကျနေသည်။ ပထမဆရာဝန် – “ဒီနိုင်ငံမှာ ငါကအတော်ဆုံး ဆရာဝန်လို့ပြောရမယ်ကွ။” ဒုတိယဆရာဝန် – “ဘာတွေစွမ်းဆောင်ခဲ့လို့လဲ။ လင်းစမ်းပါဦး။” ပထမဆရာဝန် – “လက်ချောင်းခုနှစ်ချောင်းပြတ်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ငါပြန်ဆက်ပေးခဲ့ ဖူးတယ်။ ငါဆက်ပေးလိုက်တာ ကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူး။ အခု သူက ကမ္ဘာကျော်စန္ဒယား ပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလေ။” ဒုတိယဆရာဝန် – “မင်းဟာကဘာဟုတ်သေးလို့လဲ။
ချစ်သူကောင်မလေး စိတ်ကောက်ရင် ချော့လိုက်ပါ.
blueseaskt | March 15, 2019
ချစ်သူကောင်မလေး စိတ်ကောက်ရင် ချော့လိုက်ပါ.. 😊 ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်မလေးက စိတ်ကောက်ရင် ချော့လိုက်ပေါ့ 😏 သူက စကားမပြောရင် ကိုယ်က အရင်ခေါ်ပေါ့ 😏 သူကောက် ကိုယ်ကောက်ဆို ကွေးပြီး ပြတ်သွားဖို့ပဲရှိတယ် 😒 မိန်းကလေး ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တောင် တစ်ခါတစ်လေ နားလည်တာ မဟုတ်ဘူး 😂 ကောက်တယ် ဆိုကထဲက
blueseaskt | March 11, 2019
ပဲကြီးလှော်၏စွမ်းအား —————————– တစ်ခါတုန်းက ပဲကြီးလှော် အင်မတန်ကြိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရှိသတဲ့။ ပဲကြီးလှော်ကြိုက်တတ်ပေမဲ့ သူမရဲ့ ပြဿနာကတော့ ပဲကြီးလှော် စားပြီးတိုင်းမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် တားမနိုင်ဆီးမရ ချက်ချင်းလက်ငင်း လေလည်တတ်တာပါပဲ။ တစ်နေ့ကျတော့ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုက်သွားပြီး လက်ထပ်တော့မယ် အလုပ်မှာ သူမ ဘာသာတွေးသတဲ့ ” ငါ့ယောက်ျားဟာ အင်မတန် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့နူးညံ့ပြီး
အားလုံးပဲ ဒီပို့စ်ကို ကျော်မသွားဘဲ တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ။
အားလုံးပဲ ဒီပို့စ်ကို ကျော်မသွားဘဲ တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ။ ..ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ဒီနေ့ တောဖက်က အမျိုးတွေအိမ်သွားလယ်ရင်း တွေ့ခဲ့တာပါ။ ပုံကို သေချာကြည့်ပါ။ နွားနှစ်ကောင်လုံးရဲ့ ပါးစပ်တွေကို ဝါးခြင်းအသေးတွေနဲ့ ပိတ်ထားပါတယ်။ တွေးကြည့်ဗျာ ဒီလိုဆိုရင် နွားလေးတွေ အစာစားရင် ဘယ်လိုစားကြမလဲ ။ နွားလေးတွေလည်းကြည့်အုံး ပိန်လှီပြီး အစာမစားရတဲ့ပုံ။ နွားတွေအတွက်
ဖုန်း​အော်​ပ​ရေတာဟာသ (ရီလိုက်​ရတာ အရမ်းး)
blueseaskt | March 10, 2019
This is called È😁😁😁 ”အင်း ဖုန်းဘေလ်တောင် နည်းနေပြီလား မသိဘူး။ ၅၀၀၀ လောက် ထည့်လိုက်ဦးမှပဲ” ”တောက်… တောက်… တောက်… တောက်” ”မင်္ဂလာပါ။ ဖုန်းဘေလ် 5000 ကျပ် ဖြည့်သွင်းပြီးပါပြီ။ လူကြီးမင်း၏ လက်ကျန်ငွေမှာ 2538 ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်” ”ဟ… ဘာတုန်းဟ… ခုပဲ
#စာမေးပွဲ ခန်းထဲမှာ ​ကျောင်းသား တစ်​​ယောက်​က အနားမှာ ရပ်​​နေတဲ့ ဆရာမကို ​ပြောတယ်​ ” ဆရာမ ” ” ဘာလဲ !” ” ဟို​လေ –မ​လေးမစား လုပ်​တာ မဟုတ်​ပါဘူး -အားနာနာနဲ့ပဲ ​ပြောပါရ​စေ ဆရာမ ” ” ကဲ -​ပြောမှာသာ ​ပြောစမ်းပါ ”